ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Anping Shiheng Medical Instruments Co. , Ltd ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်CE နှင့် FDA အပါအ ၀ င်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးနှင့်လုံခြုံမှုစံနှုန်းများထက်ကျော်လွန်သည်။ ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပမှဖောက်သည်များအားမြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်စံထုတ်ကုန်များသည်နိုင်ငံတကာမှကျော်ကြားသောအရိုးအထူးကုထုတ်ကုန်ကို OEM ထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုဥရောပ၊ အမေရိက၊ အာဖရိက၊ အရှေ့တောင်အာရှနှင့်အခြားနိုင်ငံများသို့တင်ပို့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်း ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ သင်၏ယုံကြည်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်အကြီးမားဆုံးသောအသိအမှတ်ပြုမှုဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များအပေါ်မှီခိုခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကိုစျေးကွက်ဝယ်လိုအားအရစျေးကွက်ရှာဖွေရေးထုတ်ကုန်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်မိတ်ဆက်ပေးမည်။
Anping Shiheng Medical Instruments Co. , Ltd
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများရောင်းချသည့်အထူးပြုဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အားကစားပစ္စည်းကိရိယာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတွင်ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံရှိပြီးစတုရန်းမီတာ ၁၂၀၀၀ ကျော်ကျယ် ၀ န်းပြီး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလေးခုနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောနည်းပညာလုပ်သားများ ၂၀၀ ကျော်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ ထို့အပြင်တရုတ်နိုင်ငံ၏မြောက်ဘက်တွင်အရိုးအထူးကုအထောက်အပံ့များကိုပံ့ပိုးပေးသူလည်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရိုးအထူးကု orthoses၊ ခွဲစိတ်မှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းထုတ်ကုန်များကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ရောင်းချရန်အထူးရည်ရွယ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းကိုခေတ်မီတိုးတက်စေရန်ကုန်ပစ္စည်းတိုင်းကိုအသေးစိတ်ထုတ်လုပ်သွားပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်ခြင်းအယူအဆ - အရည်အသွေးနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာကိုရှေး ဦး စွာရရှိရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံး။
Professional က R & D ကိုအဖွဲ့ တာ ၀ န်ရှိသည့်ဆေးရုံကျွမ်းကျင်သူများနှင့်နှစ်ရှည်နည်းပညာပိုင်းဆက်သွယ်မှုကကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်သေချာစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များတွင်လည်ပင်းထောက်ခံမှု၊ ပခုံးထောင့်၊ ခါးထောင့်၊ ဒူးထောက်၊ ခြေထောက်အထောက်အပံ့၊ ခွဲထွက်အဖွဲ့နှင့်ချိုင်းထောက်စတာတွေစတာတွေ
၁။ မေး။ သင်ဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့ဟာစက်ရုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရိုးအထူးကုဆေးတံနှင့်အားကစားအင်္ဂတေများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအထူးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၅ နှစ်ကျော်ပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးနှုန်းကိုပထမ ဦး ဆုံးလက်, အရည်အသွေးမြင့်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုစျေးနှုန်းအာမခံနိုင်ပါတယ်။
၂။ မေး။ ။ ဘယ်လိုမှာကြားလို့ရမလဲ။
A: အရောင်း ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဦး အားမှာကြားရန်အတွက်သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏လိုအပ်ချက်အသေးစိတ်ကိုတတ်နိုင်သမျှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေးပါ။ ဒါကြောင့်မင်းတို့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်သို့မဟုတ်ထပ်မံဆွေးနွေးရန်အတွက်နှောင့်နှေးမှုများရှိပါက Skype၊ TradeManger သို့မဟုတ် Wechat သို့မဟုတ် QQ သို့မဟုတ် WhatsApp သို့မဟုတ်အခြားလက်ငင်းနည်းလမ်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
3. Q: ဘယ်အချိန်မှာစျေးနှုန်းရနိုင်မလဲ။
A: ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကိုရရှိပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်းကိုးကားသည်။
4. Q: သင်နှင့် OEM ODM အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသလား။
ဖြေ - ဟုတ်တယ်။ လက်ဆောင်သေတ္တာဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသောကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့ရှိသည်။ သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုသာကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ၊ သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုပြီးပြည့်စုံသောသေတ္တာများထဲသို့သယ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီလိမ့်မည်။
၅။ Q: နမူနာရရန်ကျွန်ုပ်မည်မျှကြာမည်နည်း။
A: နမူနာကောက်ခံပြီးငွေအတည်ပြုပြီးသောဖိုင်များကိုသင်ပေးပို့ပြီးလျှင်နမူနာများသည် ၁-၃ ရက်အတွင်းပေးပို့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ နမူနာများကိုအမြန်မှတစ်ဆင့်သင့်ထံပို့မည်ဖြစ်ပြီး ၃-၅ ရက်အတွင်းရောက်ရှိပါမည်။ နမူနာကိုအခမဲ့ပေးဆောင်နိုင်သော်လည်းကုန်ကျစရိတ်ကိုမပေးချေ။
၆။ မေး။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အချိန်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။
A: ရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင်၊ မှာယူမည့်ပမာဏနှင့်သင်မှာယူသည့်အချိန်ပေါ်မူတည်သည်။ အများအားဖြင့်ရက် ၁၀-၃၀ ရက်အထွေထွေအမှာစာအပေါ်မူတည်သည်။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် EXW, FOB, CFR, ClF စသည်တို့ကိုလက်ခံပါသည်။ သင်အတွက်အသက်သာဆုံးနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။
8 မေး။ : ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကဘာလဲ
A1) ကျွန်ုပ်တို့သည် Paypal, T, Wester Union, L / C, D / A, D / P, MoneyGram စသည်ဖြင့်လက်ခံသည်။
၉။ မေး။ စက်ရုံဘယ်မှာတင်တာလဲ။ အဲဒီကိုဘယ်လိုသွားလည်ရမလဲ။
A: ကျွန်တော်တို့စက်ရုံကိုပီကင်းနားက Hebei ပြည်နယ်၊ Anping ကောင်တီမှာတင်တယ်
10. Q: အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်။ သင်၏စက်ရုံဘယ်လို fo ပါသလဲ?
A: ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အရည်အသွေးကောင်းသည့်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ယ်ယူရန်
၀ ယ်ယူသူနေရာမ ၀ င်ခင်၊ နမူနာတစ်ခုစီကိုဖောက်သည်ထံသို့အတည်ပြုပေးပါမည်။
တင်ပို့ခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်တို့၏ Shiheng ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများသည်အရည်အသွေးအားဖြင့် 1pcs ကို 1cc ဖြင့်စစ်ဆေးပါမည်။ အရည်အသွေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သည်။
CE / FDA နှင့် ISO အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ၆. အဆင့်မြင့်အရည်အသွေး